Plume Yakatwasuka Piano YY-DQN01
Piyano inofarira hupenyu, idhiini isingatombogumi Chinyorwa chimwe nechimwe, chinoshanduka. Tenzi, anotanga mune rimwe bhatani, anogona kuita kuti minwe ichitamba pane inoyevedza keyboard, imhaka ye'chip 'mukati. Mushure mekuraira, kurudzira hunoshamisa hupenyu nemoyo.
Plume Piano chete sarudza izvo zvakanaka zvinhu kune chaiyo piyano. Kana iri YY-DQN01 yedu, yepazasi dhayeti yepende piyano yakavezwa ne melamine polyester, yakashongedzwa neyakaunzwa isaturated polyester pendi, inotapira segirazi, aesthetic uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, sirivheri Hardware, colorfast uye inoramba ichivandudzwa.
Uchishandisa iyo yepamusoro-giredhi 88 noti inofambira mberi nyundo-yekuita keyboard, iyo 88 Keyboard ndiyo nzira yekugadzira inofamba timbre. Makiyi makumi mapfumbamwe nemasere anorema kuwedzera zvishoma nezvishoma, izvo zvinokodzera chaizvo shanduko yesimba remunwe, dhizaini iri kuvandudza, uye mhinduro yesando ndeyechokwadi senge chaiyo piyano acoustic.
Zvinotonyanya kukosha, isu takabatanidza iyo French DREAM sosi sosi ruzha bhodhi mupiyano yedu. Isu tese tinoziva yemahara kutamba mashandiro ndiwo muyero wesimba rehunyanzvi. Sampling kubva kune huru huru piano inogona kuburitsa ruzha rwunoita kuti vanhu vanyure munyika yemimhanzi. Nekuona kwetimbre, gonesa hunyanzvi hwekutamba, gadziridza hurema mukutamba, uye kunyange kugadzirisa kugona kwekugadzira kwepiyano mutambi.
Iko kusanganiswa kwevatauri vakakura uye yakajeka dhijitari yakakwira resolution yekuratidzira, Plume YY-DQN01 inogona kukuchengetedza iwe dambudziko rekuhaya piano mudzidzisi. Zvese zvaunoda kuti uite kutevedzera kutungamira nepiyano uye kunakirwa.
Pamusoro Zvinhu Yakakwira-giredhi PVC
Yekhibhodi Yakakwira-giredhi 88 Cherechedzo Progressive Hammer-chiito Khibhodi
Inzwi Rinobva ChiFrench DREAM Inzwi Rinobva
Stereo gudzazwi Yakakwirira-giredhi Kugadziridza 30W
Mutauri Yakakwira-giredhi Dual Channel Yakakwira Kuvimbika Hom
Inowanikwa MIDI, Stereo Mahedhifoni, Audio, DC 15V Magetsi
Simba rekubuda 15W * 2
Ratidza Yakakwira Resolution LED Ratidza
Mamwe Mabasa Dual Timbre, Metronome, Yekudzidza Mode, Rekodhi / Kutamba, Kuchinjisa, Kodhi Yehukama Yakanyanya Kudzora
Pashure: Plume Yakatwasuka Piano YY-DJ02
Antique Yakatwasuka Piano
Nhema Yakarurama Piano
Boston Yakatwasuka Piano
Tenga Yakarurama Piano
Dhijitari Yakatwasuka Piano
Magetsi Akarurama Piyano
Kufambisa Iyo Yakatwasuka Piano
Yakarurama Acoustic Piano
Akarurama Player Piano
Wood Yakatwasuka Piano
Plume Yakatwasuka Piano YY-DJ01
Plume Yakatwasuka Piano YY-DJ02
Magetsi Akarurama Piyano, Yakaderera Mutengo Dhijitari Piano, Smart Piano Khibhodi, Dhijitari Yakatwasuka Piano, Magetsi Grand Piano, Dhijitari Piano Kugadzirisa,